Nei Tichifanira Kusarudza Hengsu Inoratidzira Kutengesa - Dongguan Hengsu Green Building Material Co Ltd.
musha » nhau » Company News
Sei Uchisarudza Hengsu Composite Decking
Time: 2017-09-21 Hits:
WPC Kuronga kuve sarudzo yakakurumbira kumisha yakawanda. Kunyange iyo inogona kudhura zvakawanda, ichiri chakanaka sarudzo nekuda kwezvikonzero zvakawanda.
Hezvino zvakanakira Hengsu Composite WPC Decking Boards.
Inoda kuderedzwa kwakadzika
WPC decking kunoda zvishoma kana pasina Nokuraramisa zvachose nekuda kwayo anokwanisa withstanding migumisiro utsinye okunze. Saka anogona kuramba runako rwayo kwemakore. The nyaya yakasiyana ne zvetsika matanda shop. Wood-epurasitiki rinoumba shop regai achaora , yakarukwa, discolor mbeu, monyorora, -buda, kana kukwezva notupukanana. Natural matanda zvinoda kugara oiling uye staining uye izvi zvinogona kuva dzinodhura. hwoupenyu decking hakudi nguva kupenda, staining kana Simbiso uye kudzivisa weathering, the warp uye kukuvadza nokuda UV mwaranzi.
Inopa hutano hwakawanda
Kusiyana nezvimwe huni decking zvinhu, WPC decking riri banzurwa-akasununguka uye pitikoti nemishonga. Uhwu musha wakachengeteka nokuda vana uye dzinovaraidza sezvazvakaita nani kufamba pachena dzakaparadzana.
Chokwadi chinyakare huni decking angava akanaka asi chokwadi ndechokuti haazogari kwenguva refu. Asiri mamiriro okunze muchirimo, chitubu nechando chikonzero akawanda kukuvara achivasiya kwakapera, yakaora, yakapatsanuka uye kuvhiringidzika. Wood-chikweshe rinoumba shop rakagara zvakaoma kugadzira muitiro kuitira kupindirana, zvishoma-kuvariritira uye chaizvo decking unongotaura.
Wood-Mapurasitiki rinoumba decking inowanzopiwa yakaiswa pamusoro dzesub puranga zvichireva inogona kushandiswa kutsiva zvakaora matanda pasina kudikanwa nokutsiva puranga. Uyezve pazasi pamusoro fixings kuti kuisa rinoumba uriri mapuranga zvachose kutsanya uye nyore.
Yakawanda yeWPC inogadzirisa zvinhu yakagadzirwa kubva kuzvinhu zvakare zvakashandiswa zvakare kusanganisirazve matanda akaoma uye mapurasitiki. Izvi zvinoderedza zvakanyanya kuwanda kwemapurisa epurasitiki.
KUMASHURECompany Relocation Notification